महिलाले चलाएको कारमा चढेर जनप्रतिनिधि जव सरर कार्यक्रममा भित्रिए (भिडियो हेर्नुस्) – Dailny NpNews
बुधबार ११ जेठ २०७९
अमेरिकाको विद्यालयमा १८ वर्षीय किशोरले गो लीबारी २१ जनाको मृ त्यु
काठमाडौंमा अफिसको कोठाभित्र दिउँसै एक महिलालाई…
धुर्मुस–सुन्तलीले बनाउन थालेको क्रिकेट रंगशाला सरकारले पूरा गर्ने
महिलाले चलाएको कारमा चढेर जनप्रतिनिधि जव सरर कार्यक्रममा भित्रिए (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २९, २०७७ समय: २०:२१:२५
काठमाडौ । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा महिलालाई लक्षित गरेर गाडी चलाउने तालिम दिए पछि सोही कारमा चढेर जनप्रतिनिधिहरुले उनीरुको हौसला बढाएका छन । जनप्रतिनिधिहरुले महिलाले चलाएको कारमा चढेर आफुहरु ढुक्क भएको बताएका छन् । पुरुष भन्दा महिला संवेदनशिल भएकाले सुरक्षित हुने पनि उनीहरुको भनाई छ । गाडी चलाउन निस्केका महिला यस्तो अवसर र जनप्रतिनिधिले दिएको प्रतिकृयावाट उत्साहित भएका छन् ।
रेसुङ्गा नगरपालिका वडानम्बर–९ को उपल्लो तम्घासमा सञ्चालन गरिएको १ महिने सिपमूलक ड्राईभिङ्ग तालिमले महिलाहरु उत्साहित भएका हुन् । महिलाहरु चालकको रुपमा तयार भएपछि अब लाइसेन्स र चालकको जागिर खुलाउँदा महिलाका लागि आरक्षणको ब्यवस्था गर्ने स्थानिय जनप्रतिनिधिले जनाएका छन् । उद्घाटनका बेला सहभागीहरुले प्रमुख अतिथिलाई आफूले सीप सिकेर आफै गाडी चलाएर घुमाउने बाचा गरेका थिए । सोही अनुरुप समापनको दिन उनीहरुले आफै गाडी चलाएर अतिथिहरुलाई घुमाएका थिए ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालले अब सरकारी कार्यालय र अन्य क्षेत्रमा चालकको जागिर खुलाउँदा महिलाका लागि आरक्षणको ब्यवस्था गरिने पनि आश्वासन दिए । महिला चालक झनै सचेत हुने भएकाले सुरक्षित हुने भएकाले अब महिलालाई यो क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । हिमालयन टिभीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा महिलाहरु कार चलाउने अवसर पाएर निकै खुसी भएको देखिएको छ ।
एक महिनासम्म तालिम लिएकाहरुले यस्ता कार्यक्रम निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् । बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित तालिम संचालन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । ९ नम्वर वडाले ४२ जनालाई एक महिने तालिम दिएको छ ।
१५८ पटक हेरिएको
लौरो बोकेर जिते जनताको विश्वास, मेयर बनिसक्दा पनि अटोमै हिड्छन् हर्कराज-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आफ्नो बुढीलाई मजा आएन, ३ महिना भयो नगरेको तँ बन्छेस मेरो पार्टनर भन्थे(भिडियो सहित)
शरिर एउटै, आत्मा दुई ! भगवानका करिस्माले जन्मीएका युवतीहरु ! हेर्नुहोस् भिडियो
अन्तत : छात्रामाथि ‘से,क्स प्रस्ताव राख्ने’ सेन्ट लरेन्स स्कुलका शिक्षक प,क्राउ !